Chelsea,Manchester City iyo West Bromwich oo Badiyay “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge 2-0 uga badisay kooxda Hull City.
Kooxda Chelsea ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii todobaad ee ciyaarta gool madax ah u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Tom Huddlestone ayaa daqiiqadii 61-aad ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Hull City.
Ciyaaryahan Diego Costa ayaa daqiiqadii 68-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Chelsea.
Ciyaaryahan Costa ayaa dhaliyay goolkiisii 12-aad ee horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga.
Kooxda Chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga ku hogaamineyso 39-dhibcood,halka kooxda Hull City ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Leicester City ayaa waxaa garoonkeeda King Power Stadium 0-1 uga badiyay kooxda Manchester City.
Kooxda Manchester City ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Frank Lampard,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Lampard ayaa dhaliyay goolkiisii 175-aad ee horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga.
Kooxda Manchester City ayaa kaalinta labaad uga jirta horyaalka ingiriiska,waxana ay leedahay 36-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Sunderland ayaa garoonkeeda Stadium of Light barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda West Ham United.
Kooxda Sunderland ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 22-aad ee ciyaarta gool rigoore ah u dhaliyay ciyaaryahan Jordi Gomez.
Ciyaaryahan Stewart Downing ayaa daqiiqadii 29-aad ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda West Ham United,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda West Ham United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta afaraad,waxana ay leedahay 28-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 16-dhibcood.
Kooxda Burnley ayaa garoonkeeda Turf Moor 1-0 uga badisay kooxda Southampton.
Ciyaaryahan Ashley Barnes ayaa daqiiqadii 73-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Burnley.
Kooxda Southampton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 26-dhibcood,halka kooxda Burnley ay ku jirto kaalinta 17-aad,iyadoo leh 15-dhibcood.
Kooxda Crystal Palace ayaa garoonkeeda Selhurst Park barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Stoke City.
Kooxda Crystal Palace ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan James McArthur.
Ciyaaryahan Peter Crouch ayaa daqiiqadii 13-aad ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Stoke City,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Crystal Palace ayaa horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 16-aad,waxana ay leedahay 15-dhibcood,halka kooxda Stoke City ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 19-dhibcood.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa garoonkeeda Hawthorns 1-0 uga badisay kooxda Aston Villa.
Ciyaaryahan Kieran Richardson ayaa daqiiqadii 22-aad ee qeybtii hore ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Aston Villa.
Ciyaaryahan Craig Gardner ayaa daqiiqadii 72-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda West Bromwich Albion.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 14-aad,waxana ay leedahay 17-dhibcood,halka kooxda Aston Villa ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 19-dhibcood.